3 Xildhibaan oo ku soo biirtay BFS iyo doorasho maanta ka dhacday xarunta Golaha Shacabka – Banaadir weyne
3 Xildhibaan oo ku soo biirtay BFS iyo doorasho maanta ka dhacday xarunta Golaha Shacabka
Kulanka guud ee Golaha Shacabka ee maanta waxaa ugu horeyn lagu dhaariyay Xildhibaanada kala ah Nuur siidow Baaba, Cali Sheekh Cabdullaahi Cali Afgooye iyo Cali Cadow Maxamed oo ah Xildhibaano cusub oo hada kusoo biiray Golaha Shacabka deegaan doorashadooduna uu yahay Maamulka koonfur Galbeed.
Kulanka oo uu shir Guddoominayay Guddoomiyaha Golaha Shacabka ee BJFS Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan oo ay Sidoo kale goob joog ahaayeen Guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha Shacabka Cabdiwali Sheekh Ibraahim Muudey iyo Guddoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka Mahad Cabdalla Cawad, ayaa waxa ay xildhibaanadu guda galeen Ajendaha labaad ee Kulanka oo ahaa u codeynta Musharaxiinta u taagan buuxinta labada xubnood ee ka bannaan Guddiga la socodka iyo dib u eegista Dastuurka JFS.
Guddoomiyaha golaha Shacabka ayaa xildhibaanada u aqriyay hannaanka iyo habraaca ay codeynta u dhaceyso.
Labada boos ee banaanaa waxaa mid walba u tartamayay afar xildhibaan iyadoo isku darka tartamayaasha ama musharixiinta ay aheyd sideed musharax oo laga rabay in ay soo baxaan laba xildhibaan si ay u buuxiyaan labada xubnood ee ka bannaan gudiga la socodka iyo dib u eegista dastuurka JFS.
Doorashada oo soo gaartay wareega labaad waxaa ugu dambeyn labada xubin ku guuleystay Xildhibaan Siciid Maxamed Maxamuud Xeyd iyo Xildhibaan Sayid Cali Cabduqaadir Macalin sida uu natiijada codeynta ku dhawaaqay Guddoomiyaha golaha Shacabka ee BJFS Maxaad Mursal Sheekh Cabdiraxmaan.
Xildhibaanada Golaha shacabka ayaa sidoo kale loo qeybiyay Akhrinta 2-aad ee wax ka bedelka sharciga batroolka Dalka oo horey Akhrinta koowaad u soo maray. – Universal TV Somali